Liiska Magacyada dadkii uu Gaarigu Kula gadoomay Dhulka Saxaraha ah ee u dhaxeeya Suudaan iyo Liibiya
illa 87 oo dhalinyaro soomaaliyeed oo dhimaso iyo dhaawac isugu jiro ayaga oo kusiijeeday saxaraha liibiya iyo suudan iskuxiro ayaa lasoo garsiiyay khartoum, kaddib markii gaari l agadoomay .
Waxa muddadani socday dhalinyaro soomaaliyeed ee ka soo barakacay dagaalada kadhanka ah ee ka socdo soomaaliya iyaga oo ka sii baxayay dalka suudaan ayaa waxa dhacay Khamiistii in lakeeno isbitalada kuyaal casimada sudaan dhaawacyo fara badan ee kuwaso wax yeelo ka soo gaartay gaari ay saarnayen oo ku siijeeday saxaraha udhexeeyo labada dal ee dariska ah waa suudaan iyo liibiya .
Dhalinyaradani la keenay ayaa waxaa lasheegay in ay yihiin kuwii ugu horeeyay ee uu lagadomay gaariga inta ee kusii socdeen dhulkasi baaxada weyn waxana lagu qiyasaya inta wax yeelada dhimashada ka soo gaartay ila 13 oo ah dhimasho iyo 3 gabar oo da,doodi aad u yareed dhaawacana waxa uu kor udhaafaya ilaa 60 qof.
siwaliba ha ahaate waxa si aanan arxan lahay uga shaqeysto arimaha tahriibka khuseeyo qaar wax ma garato ah oo ku dhaqan suudaan waxa sido kale waxad arkeysa dad lakala iibsanayo taa soo oo sababtay in ay dhallinyaradan qasabtay arrin aan arxan lahayn.
hasa ahaate waxanan ka hadlin arintani mar waliba Safaarada soomaaliya ee maqar keedu yahay dalka sudan mana ahayn hal iyo labo inta fariinta lagaar siiyay arimaha sidani ah ee foosha xun .
Ugu danbentii waxa laga yaaba meedadka dhalinyaradani in la,aaso beri markuu waqtiga ku beeganyahay 11:00 subax nimo laguna aasi dono qabuuraha (shargi) ee konfurta khartoum . hadii aanan lahelin wax aqoonsado meedadkasi soomaalida ah
MAGACYADII DADKII GAARIGA KULA GADOOMAY WADADA U DHAXEYSO SUDAN IYO LIIBIYA
1-xusen cabdi ahmad........................28sano
2-ismaaciil cabdulahi faarax................27
3-aadan xasan jaamac .....................22
4- mustafa daahir maxamad...............22
5-c/qaadir maxamad nuur..................30
6-C/qaadir maxamad maxa,muud.........24
7-Xasan cilmi muudeey......................26
8-Maxamad cilmi yuusuf.....................25
9-Manaas qaliil siyaad........................25
10-Xasan cabdala cabdi.....................43
11-Maxamad cumar aadan..................20
13-Sisiiq cabdulahi geedi....................22
14-Cabdi samad nuur
15-Ahmad maxamad cabdala
19-C/risaaq yuusuf cabdiraxman
20-Cumar cabdi cabdulahi
22-C/naasir cusmaan faarax
23-C/risaaq mirre ismaaciil
24-Fu,aad maxamad ahmad
Siddo kale waxa xaalad xun kusugan :-
1-C/samad cusmaan nuur
3-Suf,yaan nuur cali
DADKA DHIMASHADA WAXA EE AHAYEEN SIDA EE XAQiiJISAY SAFARADA:-
1-C/qaadir cusmaan muuse
4-Xasan ahmad shiikh ibraahim
7-Cumar ..... (JOON)
8-C/risaaq shiikh cusmaan
9-Xasan aadan geele
Siddo kale waxa jira gabar iyo wiil oo ayaga oo meyt ah loo qaaday gobol kamid ah gobolada xuduuda suudan kuyala ayaga oonan la,aqoon magacooda waa sida ee wararka udhigeen ciidanka booliiska sudan ee waqtigasi kasoo daad gureyay halkii oo kula gadoomay gaariga.
Ugu danbentii waxa jiro qaar kamid ah dadkii ku dhintay saxaraha oo aanan lagaraneynin illa hada ciidanka poliska sudan waxa oo soo gudbiyay magayadii ee ku xusan halkan sidda saxda ah ee xaqiijin ku sameyen Ururka soomaalida ayaga oo weheshanayo safarada somalia ee sudan (waa sida ee soo xaqiijisay safarada soomaaliya-sudan)